गगन थापालाई जेल जाने चिन्ता, भीम रावल पनि फस्न सक्ने ! « Deshko News
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य गगनकुमार थापाले आफू लगायत सत्तारुढ नेकपाका नेताहरु जेल पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कास्कीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थापाले केपी शर्मा ओली सरकारले आफू लगायत नेकपाकै नेता जेलभित्र हाल्नेगरी कानुन ल्याउन लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
‘यो कानुन मलाई मात्र लाग्ने होइन । कमरेड भीम रावलले फेसबुकमा लेख्नुभएको छ, उहाँ पनि भित्र जानुहुन्छ । कमरेड माधव नेपालले दुइ दिनअगाडि बोल्नुभएको छ, मन्त्रीहरुले पैसा लिएर सरुवा बढुवा गर्छन, अब उहाँ पनि भित्र जानुहुन्छ’, थापाले चिन्ता व्यक्त गर्दै भने ।
थापाको सम्बोधनको पूर्णपाठः
संसदमा एउटा कानुन प्रस्ताव गरिएको छ । जसलाई सूचना प्रविधि कानुन भनिएको छ । हामीले बलजफ्ती रोकेका छौं । अब संसद खुल्ने वित्तिकै पारित गर्ने सरकारको तयारी छ । यो कानुनले के भन्छ? यो कानुनले भन्छ, तपाईहरु कसैले बेलुका गएर फेसबुक, ट्वीटरमा, बोलेर, कतिकतै पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताको बारेमा एक शब्द लेख्नुभयो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको टोली प्रहरी लिएर तपाइको घर आउँछ र भन्छ, तपाइले लेख्नुभएकोले हिरासतमा लिएर जान्छ । अनि तपाइलाई अदालतमा उभ्याउँछ । सरकारले छानेर तीन जनाको छुट्टै अदालत बनाउँछ । त्यो अदालतले भन्छ, तपाइले हिजो राती फेसबुकमा लेखेको कुराले प्रधानमन्त्रीको बेइज्जत भएको हुँदा, मन्त्रीलाई हेप्नुभएको कारणले तपाइलाई ५ वर्ष जेल सजाय तोकिएको छ, १५ लाख जरिवाना गरिएको छ ।
यो कानुन अब आउने संसदको बैठकबाट पारित हुँदैछ । यो कानुन मलाई मात्र लाग्ने होइन । म कमरेडहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कमरेड भीम रावलले फेसबुकमा लेख्नुभएको छ, उहाँ भित्र जाने हो । कमरेड माधव नेपालले दुइ दिनअगाडि बोल्नुभएको छ, मन्त्रीहरुले पैसा लिएर सरुवाबढुवा गर्छन, अब उहाँ पनि भित्र जाने हो ।
अब यो देशमा त्यो मान्छे मात्र बोल्न पाउने छ जसले भन्ने छः श्री ६ बडामहारानी विद्यादेवी भण्डारीकी जय, श्री ५ केपी ओलीकी जय, श्री ३ महाराज पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी जय भन्ने बाच्नेछन् । तीन जनाको जय बच्नेछन्, बाँकी सबै गए ।